Izinkampani Okuphethwe - Ningbo Nide Mechanical Co., Ltd
umugqa Armature ukukhiqizwa
Armature wokuvimbela iphepha Ifaka umshini
Wedge Ifaka umshini
Armature emazombezombe umshini
Shaft ngokucindezela umshini
Ukuphela ikhava ngokucindezela umshini
Commutator ngokucindezela umshini
Commutator indawo Welding umshini
Armature kulinganisa umshini
Armature impregnation varnishing umshini
Armature powder enamathela umshini
umshini Armature ukuhlolwa
Aluminium die asakazwe umshini
umshini ukukhiqizwa Stator
Stator ukwahlukanisa iphepha Ifaka umshini
umshini Needle emazombezombe
Stator emazombezombe umshini
Stator emazombezombe ufaka umshini
umshini Ephakathi ukwakha
umshini Final ukwakha
Stator powder enamathela umshini
Stator impregnation varnishing umshini
Stator ukuhlolwa iphaneli
Izinto zokuvala umoya iphepha
Nide uye ezilandelayo izinkampani esebenzisana nayo
1.Ningbo Nide Mechanical Izinsiza kusebenza Co., Ltd
Sise Hi-Tech District e Ningbo edolobheni, ihabhu yezimboni China, nokuthatha inzuzo ithimba eliqinile lobuchwepheshe kanye commercial, Ningbo Nide Mechanical imishini Co., Ltd ligxile-R & D, ukumaketha & yokuthengisa, ukulawula izinga futhi ngemuva kokunikezwa imishini okuyinto akhiqizwa izimboni zayo esebenzisana nayo (Jiangsu Nide Automation Tech Co., Ltd futhi Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd.
Ngaphandle imishini yokwakha endlini, elawulwa nge izinga futhi isevisi yesistimu yayo, Nide mechanical futhi inikeza abanye imishini elisizayo outsourced kusukela kwenye abakhiqizi professional amakhasimende ayo. Inhloso ukunciphisa amakhasimende umsebenzi owengeziwe futhi besakhathazeka sokukhishwa izinga.
Nide amahhovisi e-India, Brazil, Korea, Turkey, futhi Argentina, yokuthengisa kokuhle service umsebenzi net usivumele ukufinyelela futhi sipho inkonzo kumakhasimende emhlabeni wonke kalula futhi ngokushesha. Ukuthembeka, umthwalo wemfanelo futhi sisheshe ukuphendula usizo Nide ukuze uwine amakhasimende emhlabeni wonke 'ithemba seccesively, ngakho imikhiqizo kude Nide uye walungiselela ukuba amakhasimende ayo emazweni angaphezu kuka-40 ezifana eJalimane, e-Italy, eSpain, eFrance, Turkey, India, Brazil, Vietnam, eMexico, Agentina, USA, ect, amakhasimende amaningi uyena phambili emkhakheni yayo.
izifiso zethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu nge elungiselelwe iphakethe egcwele ikhambi motor yokukhiqiza.
Kutholwe ku Suzhou, esehlanganise workshop endaweni 9,000 square metres, kanye 102 isisebenzi, Jiansu Nide Automation-Tech Co., Ltd ikakhulu akhiqize ame eduze umshini futhi umugqa othomathikhi ngokugcwele lokungeniswa motor stator, BLDC motor emazombezombe umshini, imishini zangaphandle ukukhiqizwa Rotor, Rotor umhlangano line, motor umhlangano line nezinye ngezifiso umshini noma ukukhiqizwa umugqa.
Imikhiqizo ikakhulukazi isicelo olulodwa futhi isigaba ezintathu lokungeniswa motor, futha amanzi motor, umshini wokuwasha motor, isimo air motor, umlandeli motor, cindezela imoto, kagesi ibhayisikili motor, BLDC motor, Servo motor, kagesi motor yezimoto, njll ezinye yethu imikhiqizo CE sivunyiwe.
Strictly okuqanjwe 9001system ISO, ahlome okusezingeni eliphezulu ngokunemba machining luhlobo, siqinisekisa imikhiqizo yethu ukuze ihlangabezane yini nezidingo zamakhasimende 'ngqo.
Zhejiang Nide Intelligent Automation Co., Ltd, okuyinto ngokuphelele-okungewakho Ningbo Nide Mechanical Izinsiza kusebenza Co., Ltd, ehlezi zezimboni ihabhu idolobha Ningbo, ikakhulu ukugxila yakamuva emazombezombe nasemhlanganweni ubuchwepheshe zonke izinhlobo BLDC motor, kuhlanganise ngamatshe eceleni umshini futhi umugqa othomathikhi ngokugcwele ephelele. Phakathi naleso sikhathi, thina futhi ngezifiso ezinye imishini non-standard ukuhlinzekela amaklayenti izidingo yezimoto yokukhiqiza ensimini.
Okuqinile uhlelo lokulawula izinga, plus ithimba eliqinile lobuchwepheshe asivumela ukuba anikele imishini okunokwethenjelwa kumakhasimende ethu. Ifilosofi "Isevisi, Profession, Yazisa, aqotho ezingabantu" zisisiza ukuba sithandwe ikhasimende.
Nide-nje kalula, kuyinto zama hhayi kuphela ukwenza motor yokukhiqiza kulula, ikhasimende kulula, kodwa futhi ashaye okuphila kwesikhathi esizayo kulula!
Akhiwe Hengshan Qiao indawo enhle ziphuthume kwenye, isifundazwe Changzhou, Jiangsu, futhi ahlanganise indawo engaba 15000 square metres, Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd is ezikhethekile micro-motor (umshini chungechunge, umshini DC) ukukhiqizwa armature imishini yokukhiqiza. We khiqiza uhla egcwele ukukhiqizwa armature ukuma kanye imishini kanye othomathikhi ngokugcwele armature umhlangano line, ezifana kushaft ngokucindezela umshini, ukwahlukanisa iphepha ufaka mshini, armature emazombezombe umshini, nesigaxa ufaka mshini, commutator fusing umshini, commutator turning mshini, armature kulinganisa umshini, ukuhlolwa armature iphaneli, stator emazombezombe umshini, njll
Imikhiqizo ikakhulukazi zisebenza zasendlini, imoto, amandla ithuluzi, njll Esikhathini armature yokukhiqiza umshini ensimini, inkampani yethu ingenye abakhiqizi eziholela eChina, kanti zilandelana ukhishwa "Hi-Tech Enterprise" nguhulumeni.
Thina ezihamba phambili ...
Wayehlezi enhle ugu yedolobha Ningbo, ukuthatha ngokunenzuzo eziphambili izimboni ihabhu, ephelele supply chain, izitholele nezinto zokuya elula, futhi bahlanganisa iqembu lochwepheshe nge ocebile motor yokukhiqiza isipiliyoni, Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd igxile usinika ehlukile motor izingxenye kumakhasimende ethu.
Imikhiqizo zihlanganisa commutator, ibhola ukuzala, shaft, carbon ibhulashi, ukwahlukanisa iphepha, umvikeli ezishisayo, uzibuthe, umlandeli, motor ikhava yokuvikela ngocwazi. Ngaphandle kwalezi imikhiqizo, futhi sinikeza isevisi ye-motor yokukhiqiza consultant lobuchwepheshe, iphrojekthi ukwesekwa bese uvula-ukhiye wephrojekthi.
Nge emashumini nesipiliyoni motor yokukhiqiza ensimini, siyaqonda ngokujulile lokho ikhasimende ncamashi isidingo, ephawulekayo motor izingxenye yokukhiqiza net umsebenzi esiqinile izinga uhlelo lokulawula asivumela ukunikeza amakhasimende bethu imikhiqizo izinga okuhle at ngemali ephansi, inhloso yethu ukusiza amakhasimende ukunciphisa kuyisidina nokuhlonza ukungezwani ngenkathi kuthola imikhiqizo emihle izinga.
Nide ufisa ukunikeza amakhasimende emhlabeni wonke nge eyodwa-stop service for the yokukhiqiza motor. Yenza motor, baphendukele Nide, konke kuyoba lula!
14-5, East Kemao Centre, No.100 Xiangyun Road, Hi-tech District, Ningbo 315040, China.